Cabdiweli Gaas: ” Hal Taako cidna ugama tanaasuleyno”. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 30 November 2015 30 November 2015
Garoowe ( Mareeg.com)-Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiweli Max’ed Cali Gaas oo shir Jara’id ku qabtay Magaalada Garoowe ee xarunta maamulkiisa ayaa sheegay in aysan gor gortan ka geli doonin taako deegaanadooda ka mid ah.
Dr.Gaas ayaa hoosta ka xariiqey in Puntland weligeed ay ka shaqeyn jirtey nabada iyo daris wanaaga isagoo sidoo kale xusay in maamulka Madaxweynaha uu ka yahay inbadan uu u dulqaad sameeyay islmarkaana markasta ay Puntland jeceshay raadinta nabadda.
Sidoo kale Cabdiweli Gaas ayaa ku baaqay in runta laga sheego cidda gar darada wada oo aan laga leex leexan six al waara looga gaaro Colaadda soo noq noqotay.
Dhinaca kale Abdiweli Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Maamulka Puntland aya tilmaamay in mar walba diyaar u yihiin waan waan nabadeed oo lagu gari karo heshiis dhexmara 2 maamul.
Magaalada Gaalkacyo ee ay ku dagaalameen Maamullada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ka soconaya wada xaajood nabadeed oo xal loogu raadinayo xiisaddaasi.